Wararka Maanta: Axad, May 17, 2020-Dalka Nigeria, haweeney qabtay coronavirus oo umushay ilmo caafimaad qaba
Arrintaan ayaa ka dhacday cisbitaal ku yalla magaalada Abuja.
Guddoomiyaha Gobolkaasi ayaa waxa uu bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraal kooban uu arrintaasi kaga hadlayo, isagoo ku tilmaamay arrin farxad u laheyd guud ahaan dadka reer Nigeria, gaar ahaan shacabka ku nool Abuja.
“Haweeney ku jirtay qolka karaantiilka, ayaa dhashay cunug caafimaad qaba, kadib markii ay foolatay, oo qalliin lagu sameeyay” sidaasi waxaa qoraalkiisa ku sheegay guddoomiyaha Abuja, Sanoo-Oulu.
Wuxuu dhinaca kale tilmaamay in hooyada iyo cunuggeedaba ay caafimaad qabaan.
Dalka Nigeria, xanuunka COVID-19 ayaa soo ritay dad gaaraya 5,621 ruux, waxaana u dhintay dad gaaraya 176 qof, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee waddankaas.